Orinasa mpanao heloka bevava ve ny governemanta St. Kitts & Nevis ankehitriny?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Saint Kitts sy Nevis Breaking News » Orinasa mpanao heloka bevava ve ny governemanta St. Kitts & Nevis ankehitriny?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Libanona • Vaovao • People • Saint Kitts sy Nevis Breaking News • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Mila mividy pasipaoro vahiny ianao? St. Kitts sy Nevis dia vonona ny hivarotra ny pasipaorony ho any amin'ny avo indrindra, arakaraka ny maha tsara kokoa azy - ary ara-dalàna sy ofisialy avokoa izany.
Ary ahoana ny amin'ny maha-olom-pirenen'ny firenena izay mbola tsy notsidihinao sy mbola tsy notsidihinao mihitsy, fa mahazo miditra amin'ny firenena 160 hafa?
Ny governemantan'i St. Kitts sy Nevis dia niray tsikombakomba tamin'ny British Company CS Global Partners hanamorana izany.
PR Newswire dia tsy manana olana amin'ny maha anisan'ny tetik'asa hampiroborobo an'izao tontolo izao asa izao.
Androany CS Global Partners dia nanao dokambarotra manokana tamin'ny famoahana fanambarana an-gazety tao amin'ny PR NewsWire ho an'ny mpanao gazety mba haka sy hamoaka tatitra momba ny tahotra momba an'i Libanona ary hivarotra ny zom-pirenena amin'ny vahoaka Libaney ho lasa zom-pirenena St. Kitts sy Nevis.
Ny CS Global Partners aza dia manana taha manokana ho an'ny pasipaoro St. Kitts sy Nevis anio ary nampitandrina fa amin'ny fotoana voafetra ihany izany.
St. Kitts sy Nevis amin'ny tsy fisian'ny fizahan-tany dia mila ny vola. Etazonia sy ny vondrona eropeana dia hanaiky hatrany ny olom-pirenena St. Kitts sy Nevis tsy misy visa. Etazonia dia tena manana fifanarahana manokana amin'i St. Kitts ho an'ny tetika iray hahazoana mora foana ny fahazoan-dàlana US sy Green Card- amidy daholo.
Ny fivarotana ny zom-pirenena no fironana farany amin'ny raharaham-barotra any amin'ny firenena maro noana vola manerantany. Matetika ny firenena toy izany dia manana laza tsara eto amin'izao tontolo izao, ka olom-baovao dia mankafy tombony sy fidirana amin'ireo firenena izay tsy azony mora visa. Amin'ny tranga St. Kitts, ny olom-pirenena iray dia afaka miditra amin'ny firenena 160 mahery raha tsy mahazo visa.
Ny zom-pirenena toy izany koa dia varavarana fidirana ho an'ny fahazoan-dàlana hiasa sy karatra maintso any Etazonia.
CS Global Partners androany dia nanentana ireo fianakaviana libaney ho olom-pirenenan'i St. Kitts sy Nevis.
Ity no hafatra niely tamin'ny People of Lebanon tamin'ny anaran'ny Governemanta St. Kitts sy Nevis
Tatitra Vaovao Mampitandrina ny amin'ny 'Ekipa faobe fahatelo' avy any Libanona, indrindra fa avy amin'ny Bi-Nationals satria mihazakazaka ny krizy
Ny fanambarana an-gazety nataon'i St. Kitts sy Nevis naparitaky ny solontenan'ny firenena CS GLobal Partners dia natomboka tamin'ny tatitra momba ny tahotra natao hiteraka famoizam-po ary mba hahaliana ny mpanao gazety ny sehatry ny tantara.
Hoy ny famotsorana:
Tatitra iray navoakan'ny Crisis Observatory ao amin'ny University American Beirut any Libanona no namintina fa miditra amin'ny fifindra-monina fifindra-monina fahatelo ny firenena. Araka ny tatitra, ny famantarana anatiny momba ny fidiran'i Libanona ho onja fifindra-monina dia ny fahafaha-mifindra monina eo amin'ireo tanora Libaney. Miorina amin'ny fanadihadiana natao tamin'ny taon-dasa, 77 isan-jaton'ny tanora Libaney no nilaza fa mieritreritra ny hifindra monina sy hikaroka izany izy ireo, ary io isan-jato io no avo indrindra amin'ny firenena Arabo rehetra.
Niaritra krizy marobe i Libanona nanomboka tamin'izay, anisan'izany ny ady, famonoana ary fifandonana politika noho ny kolikoly sy ny fitondrana ratsy. Ny pounds Libaney dia nilentika manodidina ny 80 isan-jato, raha toa kosa ireo mpikirakira vola very tsy mahazo miditra amin'ny tahiry ainy. Matihanina maro, ao anatin'izany ny dokotera, ny akademia, ny mpandraharaha ary ny mpamorona endrika, no efa lasa na mikasa ny handeha. Amin'ny tranga maro, dia mizaka ny zom-pirenena faharoa azon'ny ray aman-dreny na raibe na renibe izay nandao an'i Libanona tamin'ny onjam-pifindra-monina taloha izy ireo.
Ireo izay mbola tsy manana backup ny zom-pirenena taloha dia nanararaotra fomba tsy mahazatra hahazoana zom-pirenena. Micha Emmett, ny tale jeneralin'ny CS Global Partners, mpanolotsaina vahaolana momba ny zom-pirenena izay manana foibe any London, dia nilaza fa mihamaro ny isan'ny olom-pirenena libaney manontany momba ny programa Citizenship by Investment (CBI). Ny CBI dia fomba fifindra-monina izay ananan'ny mpampiasa vola manome vola manokana amin'ny toekarem-pirenena ho takalon'ny zom-pirenena, ary niafara tamin'ny pasipaoron'io firenena io.
"Ny CBI matetika no toerana tsara indrindra sy haingana indrindra ho an'ireo izay miatrika tsy fahatokisana any amin'ny fireneny ary maniry fomba iray hiantohana ny hareny sy ny ho avin'ny fianakaviany," hoy i Emmett. “Mampalahelo fa ity tontolo iainantsika ity dia mety tsy ho fantatra mialoha, ary mety hianjera amintsika amin'ny fotoana tsy ampoizina ny fotoana ratsy. Ny CBI dia mamela ny olona hanana drafitra backup mandritra izao fotoana izao. ”
Ny sasany amin'ireo Programme CBI tadiavina indrindra dia any Karaiba, toerana niandohan'io hevitra io. Ny zom-pirenena avy amin'ny St Kitts sy ny programa Nevis 'CBI dia azo tanterahina raha tsy misy olana amin'ny toeram-ponenana na fitsangatsanganana ilaina. Ny dingana iray manontolo amin'ny ankapobeny dia azo atao an-tserasera ao anatin'ny volana vitsivitsy. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana ao amin'ny magazine PWM ara-bola ara-bola Financial Times, ity programa ity dia mitana ny laharana farany tsara indrindra manerantany.
Ny olom-pirenena St. Kitts sy Nevis dia afaka mandeha any amin'ny firenena 160 eo ho eo tsy misy visa na miaraka amin'ny visa-tonga. Izy ireo koa dia afaka manampy fiankinan-doha ary mizara ny zom-pireneny ho an'ny taranaka mandimby.
Ankoatr'izay, tsy misy amin'ireto olom-pirenena St. Nevis vao nekena ireto no mila mitsidika ny firenena itondrany pasipaoro.
Raha atolotra mandritra ny fotoana voafetra dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny USD150,000 ny fianakaviana iray hatramin'ny efatra, ka mitaky fihenan'ny USD45,000.
Nilaza ny talen'ny World Network Network, Juergen Steinmetz:
Mahamenatra an'i St. Kitts sy Nevis tamin'ny famoronana an'ity varavarana ity ny zom-pirenena novidiana.
Olana lehibe ny fifindra-monina ary tsy maintsy omena ireo olona mendrika ny hanomboka amin'ny firenena hangatahany zom-pirenena.
Ny fivarotana zom-pirenena dia tsy hoe ratsy fotsiny fa manimba ny fahamendrehan'ny zom-pirenena tanteraka. Izy io koa dia fandrahonana ho an'ny fiarovana sy fiarovana tsy ho an'ny firenena manome pasipaoro amidy ihany fa ho an'ny firenena rehetra manome fidirana noho io pasipaoro io.